Ezemfundo Nocwaningo - Digital Ukukhiqiza Co., Ltd.
umkhakha Ezemfundo isicelo
Ephakathi futhi okusezingeni eliphezulu amakolishi sokufundela nasemakolishi undergraduate ongafaka isicelo 3D zokunyathelisa ubuchwepheshe professional (isiqondiso 3D yokunyathelisa isicelo), futhi ungakwazi futhi ukuhlanganisa ukuhlanganiswa ubuchwepheshe amakolishi kanye amanyuvesi ukuvula uhlobo olusha ezinkulu oluyinhlanganisela. ukuma Professional zingahlukaniswa zibe izinkomba ezintathu:
1. Hlanganisa ekhona ukucutshungulwa kanye nokukhiqiza majors (yokukhiqiza mechanical, imoto yokukhiqiza, ubuchwepheshe electromechanical, isikhunta ubuchwepheshe, zezinombolo isilawuli technology, shipbuilding, njll);
2. Hlanganisa ekhona design zezimboni majors (izingubo ukuklanywa, ukwakhiwa ubunjiniyela, design umkhiqizo, udini plastic, ifenisha design nokukhiqizwa kwezinto, njll).
3. Uma luhlangene ne ekhona zezimboni art majors (art zezimboni, ubuciko design and ukukhiqizwa, digital imaging ubuchwepheshe, njll).
ukuqeqeshwa ithalente Expertised 3D
Ngonanzelelo esisebenzayo ukusebenza ikhono kanye nekhono ukuthuthukiswa, ikhulule abafundi 'ukucabanga ezintsha kanye nekhono esisebenzayo. Kusukela lwezifundo design internship umfundi ukuba yokugcina umsebenzi iziqu izincomo, umgomo wethu hlanganani izikole nokuthuthukisa ngaphezulu 3D zokunyathelisa tal amaphepha.
Ⅰ. Employment isiqondiso: design umkhiqizo, ubunjiniyela reverse, i-prototyping, ukuhlolwa umkhiqizo, yokuqinisekisa umkhiqizo, njll .;
Ⅱ. Isigaba sebhizinisi: yezimoto, isikhunta, wezokwelapha (zamazinyo, medical aid), nemiklamo yokwakha, imigexo, izingubo zokugqoka, amathoyizi, zasesiteji movie, nezicathulo, zocwaningo, izinkampani zokunyathelisa 3D, njll .;
Ungasetha i-3D zokunyathelisa ifu platform asekeleke ku-Inthanethi ukukhiqizwa futhi uvule inethiwekhi service; ungakwazi ukuvula studio creative ukuthola design umkhiqizo, ukuhlanekezela zobunjiniyela, 3D ukuhlolwa, umkhiqizo isampula ukulungiselela, yokuqinisekisa umkhiqizo, njll .; ungavula 3D isevisi ngamakhasimende amakhasimende. Phrinta esitolo ngokomzimba; Ungasetha up ukumaketha, emva-sales ithimba, usethe yokuthengisa inkampani 3D ukunyathelisa futhi 3D imishini ukuskena;
Ungavula 3D ukunyathelisa izincwajana ezingu-esitolo ngokomzimba, sifake uqobo, okungase ngokwezifiso imikhiqizo kumakhasimende; nakakhulu, ungasetha ukumaketha nangemva-yokuthengisa ithimba ke wakha Kwanyatheliswa 3D noma 3D imishini ukuskena yokuthengisa yenkampani.
Hosting kazwelonke 3D mncintiswano
Nyusa ukufundisa, ukufunda, ukusetshenziswa, emisha ukuncintisana
Ngo-July 2017, 10th Anniversary Elite League of National 3D umncintiswano owabanjwa ngo Karamay, Xinjiang, kwakukhona amaqembu angaphezu kuka-50 iqhaza ku "Digital Cup" digital design creative futhi ezihlakaniphile yokukhiqiza mncintiswano.
Ngo-September 2017, kwesibili China 3D Ukuphrinta Creative Design Competition owaqhutshelwa e Xi'an namathimba ezingaphezu kuka-80 iqhaza emncintiswaneni.
Ngo-December 2017, e-10th National 3D umncintiswano Finals aphethwe e Yuxi, Yunnan, kwakukhona amaqembu angaphezu kuka-50 iqhaza ku "Digital Cup" digital design creative futhi ezihlakaniphile yokukhiqiza mncintiswano.
Zonke uchungechunge 3D abaprintayo kanye 3D scanner